Samsung kwupụtara ọkwa ọhụụ ISOCELL GN1 Igwefoto igwefoto | Gam akporosis
Samsung na-akpọsa ihe mmetụta igwefoto 50MP ọhụrụ ya na autofocus pixel abụọ
Ọ hụrụ na-abịa na Samsung ga-achọ ịkpọsa ya ihe mmetụta igwefoto 50MP ọhụrụ nwere pixel autofocus. Ọ bụ ya mere, na awa ole na ole gara aga ọ were olu iji kwupụta ihe mmetụta ọhụrụ a.
Anyị na-ekwu maka ya ISOCELL GN1 igwefoto igwefoto nwere pikselụ ndị ọzọ, usoro autofocus ngwa ngwa na nkwado maka ndekọ vidiyo 8K. Ihe mmetụta ọhụụ anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya na njedebe dị elu nke ụlọ ọrụ ọzọ.
El ISOCELL GN1 bụ ihe mmetụta igwefoto 1 / 1.3 nke nwere mkpebi 50MP. Anyị na-ekwu maka ihe mmetụta ihe onyonyo izizi sitere na ụlọ ọrụ South Korea iji tinye abụọ pixel autofocus na Tetracell pixel binning. N'ezie, Samsung ekwuola na enwere ike ịgbanwe pixel pikal nke 1.2μm ka ọ bụrụ 2.4μm site na iji teknụzụ Tetracell mee ka foto dị ala dị elu.
Igwe ihe igwefoto ọhụrụ a e ji ya nde 100 na-elekwasị anya nkeji maka autofocus na-enwu ọkụ na-enwu ọkụ na ọnọdụ ọkụ. A na-etinye photodiodes abụọ n'akụkụ n'akụkụ n'akụkụ pixel ọ bụla, yabụ ha nwere ike ịnweta ọkụ sitere n'akụkụ dị iche iche iji rụọ ọrụ na nchọpụta oge.
N'ikwu okwu banyere pixel-binning mode, ihe mmetụta ISOCELL GN1 bụ nwere ike weghara onyonyo na 12.5MP na pikselụ 2.4μm iji mee ka foto dị ala dị ala; otu n’ime agha ndị dị ugbu a n’ọhịa nke foto site na mkpanaka. N'ezie, algọridim ya na-enye ọnọdụ nke na-enye ohere ijide ihe oyiyi 100MP site na iji ihe mmetụta 50Mp.
Akụkụ ndị ọzọ nke ihe mmetụta a gụnyere Smart ISO, gyris dabeere na EIS na ndekọ vidiyo ruo 8K na 30FPS. Ọ na - enye gị ohere ịdekọ vidiyo na 240fps na autofocus na 400fps na-enweghị autofocus.
Ọhụrụ a ISOCELL GN1 ihe onyonyo ga-abanye n'ime imepụta ihe ga-emecha ọnwa a nke mere na ọ bụ na njedebe nke afọ a mgbe ọ ruru ọhụrụ ụlọ ọrụ ọhụrụ smartphones. Naanị ọnwa 9 gara aga mgbe anyị nwere akụkọ ikpeazụ banyere onye ọzọ ọhụrụ samsung mmetụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-akpọsa ihe mmetụta igwefoto 50MP ọhụrụ ya na autofocus pixel abụọ
Honor V6 Mbadamba ụrọ: Mbadamba ụrọ nwere oghere 2K na njikọta 5G
Otu esi eji ụlọ ozi, oku vidiyo na otu nke ihe ruru mmadụ 50